Mo Farah oo noqday orad yahankii ugu wanaagsanaa ee soo mara abad dalka Britain - Kubadda Somali Sport Portal
M Sheikh / Saturday, August 17, 2013
“Ma filaynin in aan ebad aan gaari karo heerka aan maanta tiigsaday” ayuu yiri Mo Farah. “Oradkan wuxuu ahaa mid iiga adkaa kii cayaarihii sanadkii hore lagu qabtay magaalada London ee Olympic 2012. Balse tabaabusho iyo dadaal dheeri ah aan u galay sidii aan uga miro keeni lahaa ayaa ii suurto gelisay in aan maanta ku guulaysto biladan dahabka ah.
Waxaan xakameeyay naftayda goostayna in aado meel ka fog meesha ay ku nool yihiin xaaskayga iyo gabdhaha aan dhalay si aan tababar xoogan u qaato. Waxaan filayaa in ay maanta dareemi karaan reerkayga go’aankaas aan qaatay miraha guusha ay dhashay.”
Balse tani waxay Mo Farah, ka gelinaysaa baalka taariikhda cayaaraha fudud ee adduunka in uu noqdo ninkii labaad ee ku guulaysta laba tartan oo isku xigta oradada shanta kun ee miter (5,000m) iyo (10,000m).
Tan kale wuxuu magaciisa ka kor maray laacibiintii cayaaraha fudud ee u soo halgamay dalka Great Britain, sida laacibkii boodada hoose ee seddax layda (triple jumper) Jonathan Edwards iyo Daley Thompson oo isna tiro seddex mar ah ku guulaystay tartamo kala duwan.
Previous Article Maxamed Faarax (Mo Farah) oo galay buuga Taariikhda Orodada
Next Article Isboortiga iyo Kaalintiisa Horumarinta Dalka Soomaaliya (2)
7493 Rate this article: